Ihe anyị meworo iji bawanye njikọ na Twitter | Martech Zone
N’afọ gara aga, anyị rụsiri ọrụ ike iji meziwanye njikọ anyị na Twitter. Kama ịba ụba mkparịta ụka ahụ gafee blọgụ ụlọ ọrụ anyị, ụlọ ọrụ ahịa, teknụzụ ahịa, na onye akụkọ, agbadoro m atụmatụ ahụ:
Enwere m lara ezumike nká ụlọ ọrụ ịde blọgụ na akaụntụ. Marketingre ahịa ọdịnaya bụ ilekwasị anya na Martech yabụ gịnị kpatara ndị na-ege m ntị ji kewaa otu ahụ? Ndị na-arụ ọrụ na ntanetị ga-enwekwu ahịa ahịa.
Enwere m lekwasịrị anya akaụntụ ahịa na ịkekọrịta ozi ụlọ ọrụ, isiokwu anyị, pọdkastị, vidiyo na ozi ndị ọzọ bara uru. Anyị na-ekekọrịta oge ụfọdụ na-ewu ewu. Twitter bụ iyi, ọ bụghị akwụkwọ akụkọ, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ iru ndị na-ege gị ntị, ị ga-anọ ebe ahụ mgbe ha nọ… na ha nọ ebe ahụ oge niile.
Agencylọ ọrụ ahịa anyị, DK New Media, adreesị na-elekwasị anya na ọrụ anyị na-arụ, ozi ọma na ụlọ ọrụ, na ihe omume mpaghara na ọrụ ebere anyị na-arụ ọrụ.
My onye akaụntụ bụ naanị nke ahụ - ịkekọrịta ngwakọta nke ihe niile dị n'elu na ịfesa àgwà m na ndụ ụlọ m.
Anyị na-ekerịta ọtụtụ eserese na Twitter ma na-eji njikọ nkekọrịta ka mma na Jetpack ọnọ maka WordPress. Ọ na-arụ ọrụ niile… njikọ aka na-aga n'ihu na-eto na nkere nkeonwe m ahapụla akaụntụ m. Nke ahụ nwere ike ịbụ n'ihi na m na-ekekọrịta n'isiokwu nke ọtụtụ na-ezere dịka ndọrọndọrọ ọchịchị na okpukperechi. Ekwetaghị na mama on nghọta, ọ bụ nnukwu ụzọ tufuo ndị na-eso ụzọ.
Marketingre onwe gị ma ọ bụ azụmaahịa gị na Twitter bụ ihe ị ga - eme nke ọma, mana ọ ga - ewe oge. Dịka, ị gaghị ahụ nsonaazụ dị mma sitere na Twitter na ọnwa ole na ole mbụ ị nọrọ na ya, mana mgbe ọnwa isii ruo otu afọ, nsonaazụ kwesịrị ịdị ukwuu. Neil Patel, Otu esi eme ka ntinye aka Twitter gi site na 324%
Ihe omuma ihe omuma a sitere na Ndenye Ogwu na-enye otutu ihe omuma na stats jikọtara na Twitter. Ọ dị mkpa ịmata nke ahụ Twitter na-akawanye mma onyinye ya maka ntinye, kwa. Enwere m ekele karịsịa maka otú Neil si belata ihe ndị ahụ Mgbe Tweet stats n'etiti aka na olu. M a ike kwere na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ekwesịghị mgbe niile na-optimizing kacha elu awa na Twitter… ma kwesịrị ilekwasị anya mgbe ndị na-ege ha ntị bụ ihe ndị ọzọ aku.
Tags: oge kacha mma na twitteroge kacha mma iji tweetazụmahịa na twitteraka kachasị elu na twitterTwitternjikọ aka twitterihe tweet
Ọkt 28, 2014 na 2:29 AM
Echere m na ihe ọzọ dị mkpa ị ga-atụle ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na njikọ aka Twitter bụ akpaaka. Nweghị ike ịbanye n'ime akaụntụ Twitter gị kwa awa ma ọ bụ karịa iji bipụta ihe. Ya mere, iji ngwá ọrụ dị ka Buffer, HootSuite ma ọ bụ SocialOoomph bụ ihe dị mkpa. Ekwenyesiri m ike na e nwere ngwaọrụ ndị dị elu karị na-ewe akpaaka na ọkwa ka ukwuu mana ngwaọrụ ndị ahụ kwesịrị ịrụ ọrụ na mbido.
Ọkt 29, 2014 na 2:37 AM
M maa ihe na-akwado nke akpaaka ngwá ọrụ!